UKUKHUBA: I-alarm enkulu ye-nuclear yenyuke kufuphi! : UMartin Vrijland
UKUBHALA: I-alarm enkulu yenhlekelele yenyukliya yehlabathi!
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	11 Matshi 2019	• 10 Comments
Impembelelo enkulu yenkqubela yenyukliya ezayo ejikelezayo kwisikhululo samandla esikhulu saseYurophu ngoku sizathu sokwenza ngokukhawuleza i-alarm! Iindaba eziqhelekileyo zihlala zithe cwaka ngale nto, kodwa kukho ingozi engqongqo yokufumana konke. Ngaba uyazi izityalo zamandla enyukliya eBorssele okanye iThange (eBelgium)? Ngaba uyayazi impembelelo ebanzi yokutshala kwamandla enyukliya? Emva koko phawula!
Wonke umntu ngaphezulu kwe-40 ukhumbula inhlekelele yenyukliya eChernobyl 26 April 1986 njengobusuku. Inhlekelele yenyukliya ekhoyo ngoku iguqulwe yinto esondele ngakumbi kwindlu. Ngoko kubalulekile ukuba ufumane lo myalezo ngokukhawuleza kunokwenzeka en kangangoko kunokwenzeka izabelo! Beka eceleni yonke into oyenzayo ngoku kwaye wenze inyathelo ngoku! Kubaluleke kakhulu! Kuwe kuwe ukuthumela i-imeyile, ifeksi, ukuprinta, ukusabalalisa nokusabalalisa oku nge-media media kumntu wonke owaziyo.
Sithetha ngentlekele echaphazela ngqo ukuba khona kwabantu! Inhlekelele yenyukliya yeega! Ukutshala kwamandla enyukliya kuvusa i-1 impendulo: iifestile kunye neengcango zivaliwe kwaye ngokukhawuleza zingene kwindawo engaphansi yokufihla! Inhlekelele yenyukliya kwisityalo eYurophu ivelisa imisebe yomsakazo ochaphazelekayo ochaphazela konke ukutya kunye namanzi okusela. Imisebe inamandla kakhulu kwimimiselo embalwa yokuqala ukuba udinga ukwenyuka kwemoya yenyukliya ngokwenene ukuze uphile. Ukutshatyalaliswa kwesongelo ngokukhawuleza kunempembelelo enkulu, kuba ivela kwesibini ukuya kwesibini. Yibhakabhaka esibhakabhakeni esicacileyo kwaye umnxeba kwi-rediyo kunye ne-TV ihamba kunye ne-alamu enkulu emoyeni. Wonke umntu usekwesaba kwaye imiphumo ayilindelekanga.
Nangona kunjalo, le nhlekelele yenyukliya iza njengelala ebusuku. Le nhlekelele yenyukliya iyahamba ngokukhawuleza. Iibhena ze-alarm zithe cwaka kwaye uqhubeka ulala ngokuthula. Ukuba uva umnxeba wongxamiseko ukusuka kwisixhobo samandla enyukliya esikhulayo namhlanje, uya kubaleka ukufihla. Nangona kunjalo, igesi yetyhefu engenasiphelo kwaye engenakunambitha; utyhefu olungena ekhayeni lakho ngokukhawuleza; awuboni ukuba ubuthi kwaye uqhubeka uphefumula ngokuthula. Nangona kunjalo kukuchaphazela entliziyweni yakho. Ngoko enye inyukliya.
Kancinci umzimba kunye namalungu ahlasela. Uvuka kwakhona ungaphazamiseki ngentsasa elandelayo. Lo mbulali uthatha ixesha lakhe. Ingena ngokukhawuleza ebomini bakho. Awuboni kwaye ukhangele kuwe. Akukho mntu uzungezile uya kuphawula. Akukho mntu uxhalabisayo. Akukho mntu ubonakala ebuyela emva nangaphandle ekuphelelwe ithemba. Wonke umntu uzolile kwaye i-alamu yomoya ihlalise. Nenomathotholo kunye neTV abakuthuli. Khawubhekisise ukutya kweendaba zakutshanje; akukho nto ibonakala ingalunganga.
I-alamu ibonakala ingenanto, kodwa ayikho! Ingxaki kukuba ukusabela kokutshatyalaliswa kwentlekele yenyukliya kunokukwenza ukuba ugxume. Awuqapheli intlekele enyukayo. Le ntlekele inzima kakhulu. Le ntlekele isasazeka kwisizukulwana kwisizukulwana. Le ntlekele ayiyi kuhlulwa yerediyo kunye neTV. Ziyi-gasity cheats distributors! Imidiya, iindaba zentlalo kunye nenkcaso echaseneyo iipayipi zethempe ukuba ingubo yegesi yetyhefu igubungela ilizwe. Bahambisa ubuthi beemveliso zerhasi ezinobuthi eBrussels naseHague. Bakugcina ebuthongweni bakho bathi "gcina amehlo akho ivaliwe kunye nemibhobho", "imozulu iya kuba mnandi namhlanje".
Baze bakwenze inxaxheba kwinkqubo yokuvelisa. Unokwenza ivoti yakho kwaye ukhethe ulawulo olufanelekileyo lomvelisi wegesi otyhefu. Emva koko baqinisekisa ukuba ubuthi obunqumlayo kwiintlupheko zendlu yakho buvumba kakhulu. Usenokuba ngumthengisi kumnatha wobutyebi benkunkuma yegazi kwaye ufumane imali yakho emsebenzini kwiinkqubo zayo. Kwi-TV uza kubona iingxoxo malunga nephunga elimnandi kunye nefuthe le-narcotic yongcamango oluhle. Nguye umvelisi onika umxholo wokudibanisa.
Saqala ukuthanda umvelisi wegesi onetyhefu. Saqala ukukholelwa kuyo. Asizi ukuba ngcono, kuba sizalwe kwilizwe apho umvelisi wegesi otyhefu wayesekho khona. Umlimi owayehlala ephethe. Sisoloko sinikwe ngabameli abatsha kunye nabaqondisi. Kuye kwenzeka njalo iminyaka. I-Matthijs van Nieuwkerkjes ithengisa igesi yetyhefu kwirediyo, iTV kunye nephephandaba. Ibhodi entsha yefowuni entsha iyakutshabalalisa i-gesi yetyhefu ngokusebenzisa ii-chimneys kunye ne-tastier. Ukutshatyalaliswa kwenzululwazi yakutshanje kukunxilise kwaye kukunike ukuxilisa.
Ngenxa yokuba umbane ufuna ukuqhubeka ukuthengisa ukubaluleka kobukho bawo, kuyaqinisekisa ukuba abantu abakumbini abahlalayo bayesaba. Yingakho umbane ubonisa ukuba ezinye izigwenxa zibulala omnye izixhobo ezininzi kunye noogonyamelo. Nokuba iibhubhu zokujonga kunye nezixhobo eziphathekayo azikhuselekile kulezi zigebengu eziyingozi. Amaphephancwadi, i-rediyo kunye neTV zibonisa indlela abalindi befektri yetyhefu abajonga ngayo umhlaba ngokufanelekileyo kwaye ngoko abantu abasendlwini bazimisele ukuhlawula ngokubanzi konke oku khuseleko. Okwangoku, batywala i-yellow-yellow fluid kwaye bajonge ukuzizonwabisa kwi-tube yokubukela okanye baye kwizakhiwo ezinkulu apho abaculi befektri yegesi yetyhefu basasaza iipesele. Imveliso yegesi yetyhefu ifanelekile kubantu. Igcina indlela yokunxibelelana kwendlela kwaye inikezela inethiwekhi yombhobho kuwo onke amanzi aphuzayo, iipayipi zetayim kunye nezinye izibonelelo.
Emva kweMfazwe Yehlabathi yesiBini, umbane wegesi otyhefu wayeyena kuphela ophethe imali encinci yokwakha kabusha ilizwe. Emva koko savunyelwa ukuba sikhethe ukuba ngabaphi na abalawuli befektri yegesi yonyhephe bavunyelwe ukuba bakhe kabusha umhlaba. Sinokukhetha kubantu abahlukeneyo kwi-factory gas. Okwangoku ngaba ngabazala kunye nabazala babo abasesibini okanye izalamane zabasemagunyeni ababengaphambili ababonelela abalawuli befektri kunye neendwendwe ezintle kakhulu. Abanye bathi into endiyicingayo, umzekelo, ngamanye amaxesha banzima kakhulu kwibhodi elidala. Lo mntu mkhulu! Ngoko xa bandibiza ukuba ndiye kwiipolon, ndakhetha umntu endiyithanda kakhulu. Eli xesha ndiyazi: kuya kuba ngumntu ovukelayo!
Ngendlela, ndivile ukuba umvelisi wegesi onetyhefu uhlakaniphile kangangokuba banayo isebe apho egcina iliso kubantu. Ubuthi obhiqizwa ngumbane bugcina abantu kwilizwe eliqhubekayo, kodwa ke banokwenza umsebenzi wabo njengesiqhelo. Ngoku kwaye ke kukho abantu abadinga umthamo omkhulu wegesi yetyhefu. Bakhawuleza bavumelani nolawulo olukhethiweyo lwefektri. Kubonakala ngathi umvelisi wegesi otyhefu uye wafumana abahlobo bakho ukuba bahlale bejonge izinto. Baphinde baququzelele imibhikisho ngokwabo ukuze abantu bakwazi ukuvuthela i-steam encinane.
Nangona kunjalo, abaninzi abantu ngoku baxhomekeke kwiziseko kunye neenkqubo zefektri yegesi yobuthi; abaninzi abantu banomsebenzi ezinxulumene nazo of ni kezelwa umbane wetyhefu wegesi, ukuba akunakwenzeka ukucinga umbane wetyhefu ukusuka kwimihla ngemihla. Yingakho abantu baqhubeka bevotela ibhodi elitsha kwindiza kwaye ubuthi buye buba mnandi ngaphezu kweminyaka. Unokuziqhathanisa nokuqhathanisa nohlobo lwentlalo.
Kubantu abadlulileyo bangase bajonge kunye nemigca yabo kwaye bavala intente yonke. Umshicileli usuke wakha umkhosi omkhulu wabalindi. Umzi uloyiko lolo mngcipheko kangangokuthi luyekezela yonke into kunye nabantu bonke kuyo yonke indawo. Bakwenza oko kuba bethetha ukuba kukho iintlobo ezimnyama ezifuna ukuhlaselwa apha naphandle, kodwa ekugqibeleni ukukhuselwa kombane kunye nenethiwekhi yomthungelwano kwandisa. Baya kwenza ntoni xa abantu bezindlu beyeke ukuthatha inxaxheba? Kutheni abantu bezindlu beqala ukukholelwa kunye nokwethemba umbane wegesi? Ingaba kunjalo ngenxa yokuba baye bahlengahlengisa iphunga kunye neengcamango ngendlela eqala ngayo ukuyithanda?
Abantu babezisebenzisa ukuvelisa ngokwabo. Ngoku baxhomekeke ngokupheleleyo. Baye bazijwayele ukuhlaziywa kwezilwanyana kunye nokuba akukho mntu ovela kwesi sizukulwana esesazi ukuba kwakunjani ukuhlala ngaphandle kwe-anesthetic yetyhefu.
Kodwa ewe, ndikwazanga ukuba ndivote. Emva koko ndenze into. Kwaye andinayo iforkfork kwakhona. Enyanisweni, mna kunye nabamelwane bam besaba kakhulu, abantu abaxhomekeke kuyo, kodwa ngenhlanhla sisaba nethubhu yethu yokubukela. Okanye ngaba ndiya kumbuza ummelwane wam ukuba akafuni ukukrazula loo bhubhe? Mhlawumbi uya kuqothula lakhe ivoti? Akunjalo, oko kuyinyaniso: usebenzela abalindi befektri. Okanye ndiza kumbuza? Liyingozi yetyhefu yegesi!
Funda amanqaku apha apha kwiwebhsayithi ekusixwayisa ngokucacileyo malunga negesi esetyhefu esondeleyo ngokukhawuleza malunga nawe. Yiya kwikhasi lasekhaya uze uphendule kumanqaku. Kufuneka uxume kwaye uthathe isinyathelo ngokukhawuleza ukuba uqonda oko kwenzekayo! Uza kuvuselela ngokukhawuleza intsapho yakho kunye nabahlobo! Kodwa akenzi nto. Unqwenela ukulinda de ukuba ilizwe likamapolisa lidibanise ngokwabo kwaye wena nabantwana bakho ningeke niphinde niphume. Okanye ucinga ukuba konke kuya kulungile, nje ngokuba wena nabantwana bakho niyaqhubeka nisebenzela umvelisi okanye iinkonzo ezinxulumene. Unceda ukwakha intolongo yakho kunye nobutyhefu ngokuhlala ungenzi. Ixesha yenguqulelo!
11 Matshi 2019 kwi-10: 14
Siza kusiphulaphula njani le ngxenyana yokuxhomekeka?
Ngaphandle kwamanga, sifunda ukususela kwiminyaka yobudala ukuba singabi naneleyo kwinkqubo yemfundo, kodwa ukuba sithathe indawo kule nkqubo njengomntu omdala. Le nkqubo inqanda kwaye ixhaphaza abantu. Imfundo enyanzelekileyo, uxanduva lokugonywa, inyanzelo yerhafu ... unyanzelekile ukuba uthobele umthetho, ngelixa abo bamagunya kunye nabaphathi abachaphazelekayo bayayigatya imithetho nemimiselo esekelwe ngabo.
Ukuba ubona iindwendwe ezininzi ezinobungozi endandizenzayo ebomini bam, ngaba awuyi kukholelwa ukuba lo ube ngumgaqo-siseko wentando yesininzi. Owe ewe ... ukukhalaza kukuvumelekile, kodwa ukufumana okulungileyo elinye ibali.
Ngoko: Asikwazi ukukhalaza kwaye kufuneka senze okulungileyo!
Ukuba oko kungaphumeleli, ngoko uyisithakazelo nje, kuba nje kuphela iingqondo ezihlakaniphile, eziyinkalo kunye nokusebenza nzima ziphumelele ... kunjalo?
11 Matshi 2019 kwi-10: 22
Kwakhona umntu othile onikwe i-gesi yetyhefu engasebenzi kwaye ngubani oye wakha amandla. Makhe sibone ukuba sinokubamba abantu abanjalo ngeenkcukacha zethu ezinkulu kunye neAI .. kwaye mhlawumbi uye kwi-gulag
11 Matshi 2019 kwi-10: 49
Ngokuqinisekileyo, ndisenayo i-pitchfork ngokwaneleyo, i-prongs ne-handles ... eduze kweekhonkco ezimbini kunye nezinye izixhobo zamashlathi, kubandakanyeka (ezibukhali). Ewe, ndiyazi nendlela yokusingatha loo nto! Mhlawumbi luncedo xa sidibana neGoelag, kuba ngoko sihlala khona ngokufudumala, xa bengayithathi.
11 Matshi 2019 kwi-11: 52
Okokuqala, kufuneka ndixelele ukuba awubonakali ukwazi okuningi ngawo. Kukho umahluko phakathi kwemini nobusuku ngokwendlela yokwakha nokwakhiwa. Kungenxa yoko kuya kufuneka kube yinto emangalisayo ukuba isixhobo senyukliya siqhuma. Iinkqubo zokupholisa zihluke ngokupheleleyo kunye nokukhuseleko. Ukuqhawula kwi-reactor akuchaphazeli ukusebenza nonke. Ngendlela, ukuba ndiyifanele kakuhle, amaDatshi ayimveliso yeenqanawa ze-reactor kwaye yazi kwasekuqaleni ukuba le mingcipheko yayikuyo (ukuveliswa kwemveliso engafanelekanga) kwaye iphinde ikhululwe.
11 Matshi 2019 kwi-11: 55
Emva koko ndimele ndithi mhlawumbi awuzange uyifunde yonke into kwaye akaqapheli ukuba ndisebenzisa isalathisi ukwenza into ehluke ngokupheleleyo.
11 Matshi 2019 kwi-11: 59
Isalathiso (ukusuka kwisiGrike se-metaphora: ukutshintshwa; isichazi: ukutshintshwa okanye ukufuzisela: ukuchasana: ngokoqobo) uhlobo lwezithombe, apho kukho ukuthelekiswa okucacileyo.
11 Matshi 2019 kwi-12: 49
Belgium hahahahaha! ingxaki / isenzo / akukho sombululo 🙂
11 Matshi 2019 kwi-14: 58
Inqaku elikhulu unika ixesha elifanelekileyo kunye nokuqwalaselwa kwalo. Njengoko ndixhalabile, i-asap yoguquko lolawulo, i-republic ethanda idemokhrasi yangempela, amalungelo oluntu. Kodwa ewe, njengoko ndabhala ngaphambili, abantu abaqhelekileyo bafuna ukuba ngamakhoboka kubasemagunyeni abaqhelekileyo, abangaphandle. Abantu abaqhelekileyo banokukhusela abo basesikweni abasesikweni ngamabali abo.
I-Netherlands zombiland, umhlaba weziyobisi, i-porno, i-pornography yabantwana, ilizwe lokuthungula imali, enye yezona zibalulekileyo eziqhelekileyo ezigxininisa amazwe, ilizwe elibolekisiweyo elibamba amazwe ahlawulwayo kwaye alivumeli ukuba likhululeke. Oku kuphela utshintsho xa abantu abasesikweni abasesikweni benikela zabo izithuba eziphambili. Oku akuyi kwenzeka ngokuzithandela. Unyulo aluncedi ngokuchaseneyo.
11 Matshi 2019 kwi-22: 32
Hahaha, ucingisise kakuhle kwaye ichazwe kakuhle!
Isibilini esihle "inhlekelele yenyukliya", ukuvusela kwakhona ngendlela eyahlukileyo.
12 Matshi 2019 kwi-06: 10
Njengokuba iipilisi ze-iodine zizalisa i-thyroid gland, kufuneka siqinisekise ukuba imiphefumlo yethu igcwele inyaniso kangangokuba amafu anobuthi ayinayo impembelelo.
Ungayifumana kuphela le nyaniso ngokuqokelela ulwazi ngaphandle kwendawo yokhuseleko lwakho kwaye wenze uphando ngaphakathi kwakho.
Ngale ndlela ufunda ukuhlaziya i-reprogram kwaye ekugqibeleni unokuzivikela kwisifo setyhefu esivela ngaphandle.
« Kufuneka ufunde ngokuleleyo kukho isifundo sangempela ebomini
Ifowuni ephuthumayo! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 11.635.155
guppy op Ngaba kuya kubakho iintloko kwiqonga likaJeffrey Epstein?
Agnes Jonckheere op Umnyama umela inkolo ethandabuzayo ngelixa abaxhasi becinga ukuba balwela 'iyantlukwano nokubandakanywa'
Danny op Ngaba kuya kubakho iintloko kwiqonga likaJeffrey Epstein?